हेटौँडा सिमेन्टले ३८ हजार कामदार माग्यो ! - Nepal Tale - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
सो कामदारको आपूर्ति आउटसोर्सिङ मार्फत् गर्ने भन्दै यसका लागि ३० दिनको अवधिभित्र इच्छुक आपूर्तिकर्तालाई बोलपत्र पेश गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।
एकैपटक कसरी ३८ हजार कामदार ?
‘हामीले ३ जना कार्यालय सहयोगी (पियन), पानीको आपूर्ति गर्ने व्यक्ति र सरसफाई गर्ने व्यक्ति मागेका हौँ । त्यस्तो काम वर्षौँदेखि स्थानीयबासीले गर्दै आएका छन् । तर उहाँहरुलाई हामीले आउटसोर्सिङमार्फत् लिने गरेका थियौँ,’ सिंहले भने, ‘त्यसका लागि ५०÷६० जना मान्छे लाग्ने हो । तर, कार्यदिनको आधारमा बोलपत्र आह्वान गरिएकोले मात्रै धेरै देखिन गएको हो । प्राविधिक कमजोरी भएर वा हामीले स्पष्ट पार्न नसकेर यस्तो कन्फ्युजन भएको हुनसक्छ । तर, वास्तविकता चाहिँ यस्तो हो ।’
३८ हजार कामदारहेटौंडा सिमेन्ट
११ जना सचिवको सरुवा